ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ အယူအဆ အမျိုးမျိုးနဲ့ ဆွေးနွေး ပြောဆို နေကြတာ အတော် ကြာခဲ့ပါပြီ။ ကမ္ဘာကြီး အဓိက ပူနွေးလာရတာဟာ Green House Gases လို့ ခေါ်တဲ့ ဖန်လုံအိမ် အာနိသင် ဓာတ်ငွေ့တွေ လေထဲ စုဝေးခြင်းက အဓိက တရားခံလို့ ကောက်ချက် ချကြပါတယ်။ စကြာဝဠာရဲ့ စွမ်းအင် ပင်မရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ နေဆီကနေ အပူစွမ်းအင်တွေဟာ ကမ္ဘာ့လေထုကို ဖြတ်ပြီး ကမ္ဘာ့မြေပြင်ပေါ်ကို ကျရောက်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကမ္ဘာ့မြေပြင်ဟာ စွမ်းအင် အချို့ကို စုပ်ယူပြီး အချို့အ၀က်ကို လေထုထဲသို့ ပြန်လည် ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လေထုဟာ ပုံမှန် အားဖြင့် မြေပြင်က ပြန်လည် ရိုက်ခတ်ပြန်လာတဲ့ အပူတွေကို အာကာသသို့ ပြန်လည် စွန့်ထုတ်ပေးရပါတယ်။
လေထဲမှာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် အစရှိတဲ့ ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ရှိ Gas တချို့ ရောက်ရှိ စုဝေးသွားတဲ့အခါ လေထုဟာ ကမ္ဘာမြေပြင်က ပြန်လာတဲ့ စွန့်ပစ်ရမဲ့ အပူဓာတ်ကို အာကသထဲသို့ ပြန်လည် စွန့်လွှတ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။ စွန့်ပစ်ရမဲ့ အပူတွေ မစွန့်ပစ်နိုင်ပဲ တစတစ စုပေါင်းလာခြင်းသည် Global Warming ရဲ့ အစပဲဖြစ်ပါတယ်။
စက်မှုခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးနောက်မှာ စက်မှုထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံ အချို့ဟာ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံ စက်မှုလုပ်ငန်း တိုးတက်စေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအပြိုင်အဆိုင် တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ကြရာက လေထုထဲသို့ နှစ်စဉ် Green House Gases တန်ချိန် ဘီလီယံပေါင်းမြောက်မြားစွာ ထုတ်လွှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ လေထုအတွင်း ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ရှိ ဓာတ်ငွေ့တွေ စုစည်းလာခြင်း၊ နှစ်စဉ် မိုးလေ၀သ စစ်တမ်းများအရ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ပျမ်းမျှ အပူချိန် တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာခြင်း၊ အာတိတ်နဲ့ အန္တာတိကဒေသက ရေခဲတောင်တွေ အရည်ပျော်နှုန်း မြန်ဆန်လာခြင်း၊ ကမ္ဘာရဲ့ အချို့ဒေသတွေမှာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက် လာနေခြင်း စတာတွေကြောင့် ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုကို လက်မခံလို့ မရတော့တဲ့ အခြေအနေရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အကျိုးဆက်တွေ အားဖြင့် သိသာထင်ရှားနေတာတောင်မှပဲ အချို့သော သိပ္ပံပညာရှင်များက ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုဟာ မုတ်သုန်မိုး စောစောရွာစေခြင်းကစပြီး အနည်းငယ်သော ကောင်းကျိုးများကို ထောက်ပြပြီး ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို အကောင်းမြင် ၀ါဒအချို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဖန်လုံအိမ် အာနိသင် ဓာတ်ငွေ့လျှော့ချရေး သဘောတူညီချက်တွေ အကြိမ်ကြိမ်ရေးဆွဲ၊ လက်မှတ်တွေ ထိုးခဲ့ကြရာမှာလည်း အချို့ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးစ နိုင်ငံတွေက လက်မှတ်ထိုးဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ကြတာတွေ အကြိမ်ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးဟာ ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ပဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနေခဲ့တာကြာပါပြီ။ သို့တိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေ အနေနဲ့ သတိမမူ ဂူမမြင် နေထိုင်နေခဲ့ကြတာ ယခုထက်တိုင်ပါပဲ။ ကမ္ဘာကြီး တိုးတက်အောင် လုပ်တာလည်း လုပ်တာပါပဲ။ မိမိနေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီး အကြောင်းလည်း အနည်းငယ် စေ့ငုလေ့လာ ထားသင့်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ အတွက် ဒီလင့်လေးမှာ အကျယ်တ၀င့် သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
P.S: ဒါကတော့ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာကြောင်း လူတွေ သတိထားမိအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ ဟာသဆန်ဆန် ကာတွန်းလေးတွေပါ။
ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာတာ ငြင်းမရအောင်ပဲနော...
ပူလွန်းလို့ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာနေတဲ့ Santa တောင် အင်္ကျီ မကပ်နိုင်တော့ဘဲ ကုလားအုပ်စီး ခရီးသွားနေရတဲ့ ဘ၀ ရောက်နေရပါတယ်...
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာတော့ Liberty လည်း Buoy ဆောင်ရတဲ့ ကိန်းဆိုက်ရောတဲ့...
ဘလော့ဂါညီအစ်ကို မောင်နှမများထဲက အပျိုကြီးမမများအတွက် သီချင်းလက်ဆောင်လေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ခံစားနားဆင်ပေးကြပါဦးလို့... မေတ္တာတော့ မပို့ကြေးပေါ့...
မသိသူသေးသူတွေ ပေးသိတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြပြီး သိပြီးသားသူတွေကတော့ ဖွရလားဟဲ့လို့ ၀ိုင်းမေတ္တာပို့ကြမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေးပါ။ Gtalk Messenger ပေါ်မှာ အယင်တုံးကတော့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း မရှိလို့ Chat ချင်တယ် Chat ချင်တယ်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေများလာတဲ့ခါကျတော့ အားမှန်းမသိ၊ မအားမှန်းမသိ အတင်း စွတ်ရွတ် ခေါ်တတ်ကြတာတွေကို ရှောင်ရှားရေးGtalk ကို အမြဲ Idle လုပ်ထားရင် မ Good ဘူးလားဗျာ။ (ဘယ့်နှယ်ပြောပါလိမ့်နော်... ) ကဲ Gtalk ကို Idle လုပ်ပေးမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေးကို ဒီမှာ Download လုပ်ဗျာ။
Download လုပ်ပြီးနောက် Install လုပ်လိုက်ပါ။ Installation ပြီးတဲ့ခါကျရင် Gtalk ကိုဖွင့်၊ Window Taskbar ပေါ်က Gtalk Icon ပေါ်မှာ Right Click ခေါက်ပြီး Always Idle ကိုသာ ရွေးလိုက်တော့ဗျို့။
ကုမ္ပဏီတွေကောင်းစားတဲ့ ခေတ်ကာလမှာ ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ဘလော့ဂါ ညီ အစ်ကို မောင်နှမတွေ အတွက် အသုံးတည့်မဲ့ နည်းလမ်းလေးတစ်ခု။ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ခါကျတော့ ရတဲ့လခက နည်းတယ်။ ပေးထားတဲ့ လခနဲ့ မတန်အောင် အခိုင်းခံရတယ်။ တကယ်ဆို သူများကုမ္ပဏီမှာဆို ဒီလောက်လုပ်ရင် ဘယ်လောက်ရတာ… ဒါတွေက ညည်းနေကျ စကားရပ်များ အဖြစ် ကိုယ်တိုင်လည်း ညည်းခဲ့ဖူး၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ညည်းတာတွေလည်း ကြားခဲ့ဖူးမှာပါ။
ဒီလို အခြေအနေကို ကြုံလာခဲ့ရရင် အများစုက ဘာလုပ်သလဲ။ သေချာတာကတော့ ၁၀၀ မှာ ၈၀ က ပေးထားတာထက် လျှော့ပေါ့မလုပ်ရင်နေမယ်။ ပိုပြီးတန်အောင်တော့ မကြိုးစားကြတော့တာ တွေ့ရတယ်။ အစကတည်းက ခံစားခွင့်၊လခက မတိုးရတဲ့ ကြားထဲမှာ အလုပ်ကို တန်ရာတန်ကြေးပဲသဘောထားလုပ်တဲ့ခါကျတော့ အဲသည် အလုပ်သမား၊ ၀န်ထမ်းသည် ဘယ်သောအခါမှ ခံစားခွင့် ထပ်တိုးပေးခြင်းမခံရတော့ပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ပဲ ချာလည် ချာလည်နဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ မလုပ်၊ မရှုပ်၊ မပြုတ် ၀န်ထမ်းအဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်နေကြရတော့တာပါပဲ။
ဒီတော့ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းနေကြတဲ့ ဘလော့ဂါညီအစ်ကို မောင်နှမများ …. (နည်းနည်းတော့ ဆရာလုပ်မယ်ပေါ့နော်…) ခံစားခွင့်၊ လစာ ဒီထက်မတိုးချင်ဘူးလား။ (ဘယ်ပြောပါလိမ့်နော်) ကဲ တိုးချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်တုံးက သုံးခဲ့တဲ့ နည်းလေးဝေမျှမယ်ဗျာ…
ကျွန်တော့်နည်းက ရှင်းရှင်းလေးပါ။ အခုလောလောဆယ် ကို ဒီလောက်ပဲရနေတယ်ဆိုတာ ကို့ရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတန်ဖိုးဟာ ဒီလောက်ပဲ တန်သေးလို့ပါ။ အဲဒီတော့ ဒီထက်များများလိုချင်ရင် ဘာလုပ်မလဲ၊ ဒီထက် ထိုက်တန်အောင် ကိုက ကြိုးစားရုံပဲရှိတော့တာပေါ့။ ဘယ်လိုကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကတော့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ကိုယ်သာ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။
ဒီလိုပြောတော့ စာရှုသူက ပြန်ပြောချင်မယ်။ အမယ် သူများကုမ္ပဏီတော့ ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်။ တို့ကုမ္ပဏီကတော့ ဒီလို မဟုတ်ပေါင်… အခုထက် ဆယ်ဆမကလုပ်ပေးလည်း လခတိုးမပေးဘူး။ မောင်ရင့်နည်းက တို့ကုမ္ပဏီအတွက်တော့ မှားသွားပြီဆိုပြီး ပြောချင်သူတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အိုကေ… အဲဒီအတွက် အဖြေက ဒီလိုရှိပါတယ်။
လောကကြီးဟာ မျှခြေအခြေအနေမှာ အမြဲရှိနေတယ်။ လူတစ်ဦးနဲ့ သူရောက်နေတဲ့ နေရာရဲ့တန်ဖိုးကို လောကကြီးက အမြဲ ချိန်ညှိပေးရပါတယ်။ ၁၀ ဖိုးတန်တဲ့သူနဲ့ ၁၀ ဖိုးတန်တဲ့ နေရာနဲ့ အမြဲ ဒွန်တွဲပေးရပါတယ်။ အကယ်လို့ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာသည် ၁၀ တန်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီး ကိုယ်က အဲဒီထက် ပိုတန်ဖိုးမြင့်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် (၁၅ ကျပ်တန်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာ) အခြေအနေနဲ့ လူသည် တန်ဖိုး မကိုက်ညီတော့ပါဘူး။ အဲဒီအခြေအနေမှာ လောကကြီးရဲ့ မျှခြေ ပျက်နေပြီဆိုတာ လောကကြီးက သိပြီး ပြန်ညှိပေးရပါတယ်။ ညှိတဲ့ ပုံစံက နှစ်နည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိ မိမိလုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီက မိမိကို ခံစားခွင့်တိုးပေးသည်ဖြစ်စေ၊ အကယ်လို့ တိုးမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်း မိမိရဲ့ အခု ခံစားခွင့်ထက်ပိုတဲ့ ခံစားခွင့် ပေးတဲ့ အလုပ်ကို ပြောင်းရွှေ့နိုင်မဲ့ အခွင့်အလမ်း ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါ မိမိက နှစ်လမ်းထဲက တစ်လမ်းရွေးရုံပါပဲ။ မိမိကုမ္ပဏီက တိုးပေးတဲ့ ခံစားခွင့်ကို ကျေနပ်တယ်ဆိုရင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပြီး၊ တိုးမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ တိုးပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီကို ပြောင်းရုံပါပဲ။
သို့အတွက် အခုလက်ရှိအလုပ်သည် မိမိအတွက် မထိုက်တန်ဘူးလို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိရတဲ့ ခံစားခွင့် လခသည် လုပ်နေရတဲ့ တာဝန်နဲ့ မထိုက်တန်ဘူးလို့ ယူဆခဲ့ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခုထက် ပိုတန်အောင်သာ ကြိုးစားလုပ်ပေတော့ ဗျို့… ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတချို့တော့ ဒီနည်းနဲ့ ကြိုးစားခဲ့တာ အောင်မြင်မှုရခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် စမ်းကြည့်နိုင်အောင်လို့ ဝေမျှလိုက်ခြင်းပါ။….
ကုလားတန်မြစ်၏ တစ်ခုသော ညနေ။ မြစ်ကမ်းနဘေးသို့ ကလေးငယ်နှစ်ဦး လမ်းလျှောက်လာနေ၏။ ကလေးငယ်နှစ်ဦးမှာ တစ်ဦးက ၁၀နှစ်ခန့်၊ တစ်ဦးက ၈နှစ်ခန့်။ ကလေးအကြီးက အငယ်ကို ပခုံးပေါ်လက်တင်ပြီး လျှောက်လာ၏။ လွယ်လာသော လွယ်အိတ်နှင့် ၀တ်စားထားပုံကို ထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့် ကျောင်းမှပြန်လာသော ကျောင်းသားလေးများ ဖြစ်ပုံပေါ်သည်။ ကလေးအငယ်၏ လက်ထဲတွင်လည်း ဗလာစာအုပ်တချို့၊ ခဲတံတချို့ကိုင်ထားသေး၏။
မြစ်ကမ်းနံဘေး တစ်နေရာအရောက် ကလေးအကြီးက
"ကဲ ညီလေး လာ.. ကိုကိုတို့ ဒီမှာထိုင်ရအောင်"
"ဟုတ်ကဲ့ ကိုကို" ဟုဆိုကာ ကလေးအကြီး ထိုင်သော ကျောက်ခုံပေါ် ဘေးချင်းယှဉ်ထိုင်လိုက်၏။
"ကဲ ညီလေး... မင်းဒီနေ့ ဆုရတဲ့ ဗလာစာအုပ်နဲ့ ခဲတံပေးစမ်း"
ကလေးအငယ်က လက်ထဲ တယုတယကိုင်လာသော ဗလာစာအုပ်နှင့် ခဲတံတချို့ကို ပေးလိုက်၏။ ကလေးအကြီးက ထိုစာအုပ်နှင့် ခဲတံများကို ယူ၏။ သို့နောက် ဘေးနားတွင်ကျနေသော ကျောက်ခဲခပ်ကြီးကြီး တစ်လုံးကိုရှာ၏။ ရသောအခါ ၄င်းကျောက်ခဲဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ ထုခြေ၏။ ထုခြေလို့ အားရသော် ရှိသမျှ အားဖြင့် မြစ်ထဲသို့ လွှင့်ပစ်လိုက်လေတော့၏။
ညီအငယ်လုပ်သူမှ အစ်ကို၏ လုပ်ရပ်ကို နားမလည်သလို မျက်နှာပေးဖြင့် ဘေးမှ နှမြောတသစွာ ကြည့်နေရုံသာတတ်နိုင်၏။
"ကိုကို.... အဲဒါ ဘာလုပ်တာလဲ... " "အဲဒါ ကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးက လိုချင်နေတဲ့ ဆုလေ..." "အဲဒီ ဆုရဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရသလဲ..." "ကြိုးစားလို့ အခု ဆုရခဲ့ပြီ... ရလည်းရရော.. ကိုကိုက ဖျက်ဆီးပစ်တယ်" "အိမ်က အမေ အဖေတို့ မေးရင်ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ပြန်ပြောမလဲ"
"အေး... ညီလေး... ဒီဆုဟာ...တစ်ကျောင်းလုံးက လိုချင်နေတဲ့ ဆုဆိုတာ မှန်တယ်...
ဒါပေမဲ့... ငါနဲ့ မင်းနဲ့.. လိုချင်ခဲ့တာ ဒီဆုမဟုတ်ဘူး...
ငါတို့ လိုချင်ခဲ့တာ ပထမဆု... အခုရတာက ဒုတိယဆု... မင်းမြဲမြဲမှတ်ထား... ဘယ်တော့မှ... ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒုတိယဆုနဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ မသတ်မှတ်လေနဲ့...
ငါတို့လိုချင်တာ ပထမဆု... အေး... အဲဒီအတွက် ပထမဆုမရရင်... လုံးဝမယူနဲ့... "
ဇာတ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်သူ နှစ်ဦးက ကလေးအကြီး အမည်က ပေါ်ထွန်းအောင်၊ အငယ်က ကျော်ထွန်းအောင်။ ပေါ်ထွန်းအောင်ဆိုသူက နောင်တစ်ချိန်မှာ မြန်မာလွတ်လပ်ရေးအတွက် မျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့သူလို့ သမိုင်းမှာ လူတွေသိကြတဲ့ အသျှင်ဦးဥတ္တမအလောင်းအလျာ။
ဒီအတ္ထုပ္ပတ္တိကို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာ ဟိုးငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ကတည်းက၊ သို့ပေမဲ့ ဆရာတော်လောင်းလျာဖြစ်တဲ့ ပေါ်ထွန်းအောင်ရဲ့ ပြောစကား... အဲဒီဇာတ်ကွက်လေးက မျက်စိထဲက မထွက်... အဲဒီ စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲ ဆရာတော်ဟာ ဘ၀မှာ ဒုတိယဆုကိုဆို လက်မခံဘဲ ပထမဆုသည်သာ ငါနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ ယူဆပြီး ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက် အရှေ့အာရှတလွှားမှာ အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အထိ။
ကျုပ်တို့ ဘ၀တွေမှာရော... ကံကြမ္မာက ပေးလာတဲ့ အချိုသတ်နှစ်သိမ့်တဲ့ ဒုတိယဆုတွေ ဘယ်နှစ်ခုများ ကျုပ်တို့ လက်ခံခဲ့ ပြီးပြီလဲ...
မိမိကိုယ်ကို ဒုတိယဆုနဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ သတ်မှတ်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ပထမဆုဟာ ကျုပ်တို့နဲ့ အဝေးကြီး ဖြစ်နေဦးမယ် ဆိုတာပါပဲ...
ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့ဟာ ကမ္ဘာ့ ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုခံအား ကျဆင်းကူးစက်ရောဂါကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာ နှစ် ၂၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ အခု အချိန်အထိ ကမ္ဘာ လူသားဦးရေ ၃၃.၂ သန်း ခန့်ဟာ ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီ ပိုးနဲ့ အတူနေထိုင်နေကြရပါပြီ။ အဲဒီ အထဲက ၃၀.၈ သန်းဟာ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများဖြစ်ကြပြီး ၊ ၁၅.၄ သန်းဟာ အမျိုးသမီးများဖြစ်ကာ၊ ၂.၅ သန်းကတော့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ၁၅ နှစ်အောက် ကလေးတွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်းမှာ လူဦးရေ ၂.၅သန်း အသစ်ကူးစက်ခံခဲ့ကြရပြီး၊ အဲဒီထဲမှာ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၂.၁ သန်းနဲ့ အရွယ်မရောက်သေးသူ ၁၅နှစ်အောက် ကလေးငယ် ၄သိန်း ၂သောင်းကျော် ပါဝင်တယ် ဆိုပါတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ အေအိုင်ဒီအက်စ်ကြောင့် သေဆုံးရသူ ၂.၁ သန်းရှိခဲ့ပြီး၊ အဲဒီအထဲမှာ အရွယ်ရောက်သူ ၁.၇ သန်းနဲ့ အရွယ်မရောက်သေးသူ ၁၅နှစ်အောက် ကလေးငယ် ၃သိန်း ၃သောင်းကျော် ပါဝင်တယ် ဆိုပါတယ်။
အခုအချိန်အထိ ဒီရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီ ဗိုင်းရပ်စ်ကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်တဲ့ (သို့) အမြစ်ပြတ်သုတ်သင်နိုင်တဲ့ ဆေးဝါးရှာမတွေ့သေးပါဘူး။ လက်ရှိ သွေးအတွင်းရှိတဲ့ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီပိုး အကောင်ရေ တိုးပွားမှု နှုန်းကို နှေးကွေးအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆေးတစ်ချို့ကလည်း ဈေးနှုန်းမြင့်မားလှတာကြောင့် ထင်သလောက် ခရီးမပေါက်ဖြစ်နေတယ် ဆိုပါတယ်။ အကောင်းဆုံး တားဆီးကာကွယ်နည်းက ရောဂါရစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည် သဘောပေါက်ပြီး၊ အဲဒီနည်းလမ်းတွေ မပြုလုပ်မိအောင် ဆင်ခြင်နေထိုင်ခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးလို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လက်ခံထားရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။